Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Bandhig faneedka casriga ah ee caalamiga ah ee Kyoto
Goobta ugu weyn ee ACK: Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Kyoto (ICC Kyoto)
Dhawaan la bilaabay iyada oo hoos imanaysa mawduuca "farshaxanka casriga ah iyo iskaashiga," Iskaashiga Farshaxanka Kyoto (ACK) waa nooc cusub oo bandhig faneed ah oo markii ugu horeysay lagu qabtay ismaamulka Kyoto. Waa mid ka mid ah carwooyinka ugu waaweyn Japan ee loogu talagalay farshaxanka casriga ah waxayna ka dhici doontaa goobta Xarunta Shirka Caalamiga ah ee Kyoto laga bilaabo Noofambar 5 ilaa 7 oo matalaya in ka badan 50 galleries ka yimid Japan, Aasiya, Yurub iyo Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika labadaba.
ACK waxay xooga saaraysaa afar nooc oo wada shaqayneed. Mid ka mid ah waa iskaashiga ka dhexeeya Jaban iyo qolalka dibadda. Galleeriyada Jabbaan waxa ay ku siin karaan in ay la wadaagaan booska buushka sawirada dibada ee ay xidhiidhka la leeyihiin. Sidan, isbeddellada caalamiga ah ee hadda jira ayaa lagu muujin karaa iyada oo isla markaa la siinayo fannaaniinta Japan bandhig caalami ah. Mid kale wuxuu u dhexeeyaa qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Ka-qaybgalka dawladdu waa qalab lagu dhimo guud ahaan khidmadaha kor u kaca ee lagu xidho bandhigyada fanka, halka ka qaybgalka qaybta gaarka ahi ay xaqiijinayso khibradda keenista dareenka iyo mahadnaqa fanaaniinta la soo bandhigay. Nooca saddexaad ee wada shaqayneed ee ay samaysay ACK waxa ay ka muuqataa nidaamka 'Agaasimaha wadajirka ah' ee ACK kaas oo udub dhexaad u ah xaqiijinta bandhig faneed tayo sare leh. Ugu dambeyntii, ka faa'iidaysiga ururinta xirfadlayaasha farshaxanka casriga ah, iskaashiga cusub ee dhinacyada kale, sida tignoolajiyada dhijitaalka ah ama codsiyada warshadaha, ayaa la filan karaa.
Goobta bandhigga fanka ee ACK waxa loo qabanqaabin doonaa laba qaybood - Iskaashi Gallery, oo ka muuqda 22 Jaban galleries martida loo yahay iyo 23 goobood oo ay martida ku yihiin dibadda, iyo Kulamada Kyoto, oo diiradda saaraya 9 galleries oo soo bandhigaya fanaaniinta xiriirka la leh Kyoto. Intaa waxaa dheer, ACK waxay ku qaban doontaa Beyond Kyoto meel bannaan oo bilaash ah oo ku taal Xarunta Shirarka Caalamiga ah ee Kyoto goobta ugu weyn ee carwada iyo Kyoto Xiga onlayn si loo xoojiyo fursadaha lagu gudbinayo macluumaadka ku saabsan farshaxanka casriga ah ee Kyoto ee dibedda. Farshaxanka Kyoto, oo u dhexeeya farshaxanno ilaa casri ah, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay barnaamijyo kale sida Kyoto Beddelka ah 2021, Bandhig faneed ay soo qaban qaabisay ismaamulka Kyoto oo lagu qabtay goobo kala duwan oo ku yaala guud ahaan ismaamulka Kyoto, iyo munaasabado lagu qabtay agagaarka magaalada Kyoto.
ACK ayaa dib loo dhigay sababtoo ah masiibada COVID-19. Hadda waxaa lagu qaban doonaa tallaabooyin si buuxda looga ilaaliyo infekshanka. Haddii xarumaha martida ay dhibaato kala kulmaan inay u safraan Japan sababo la xiriira xannibaadaha COVID, goobaha martigeliyaha waxay sameyn doonaan qabanqaabin iyo soo bandhigid farshaxankooda, iyagoo dammaanad qaadaya goobaha martida joogitaanka ACK. Qalabka dhijitaalka ah ayaa sidoo kale awood u siin doona gelitaanka khadka tooska ah ee ACK.